အပြိုင်အဆိုင် – Grab Love Story
ကျော်ထက်တစ်ယောက် သူဇာ နဲ့ ခိုင်သူ ညီမနှစ်ယောက်အလာကို ကျောင်းစာကြည့်တိုက်အရှေ့မှ စောင့်နေသည်။ ကျော်ထက်သည် ထိုညီမနှစ်ယောက်ထဲမှ အကြီးဖြစ်သူ သူဇာကိုချစ်ခွင့်ပန်ထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူဇာသည် ကျောင်းတွင်း Missပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူဇာသည် ယောက်ျားလေးတိုင်း ငေးရသောသူ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်သူဇာသည် အရမ်းလှသလောက်အရမ်းမာနကြီးသူ တစ်ယောက်လဲဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောသူတစ်ယောက်ကိုမှ ကျော်ထက်ဆိုသည့် ကောင်လေးက အရမ်းစွဲလမ်းကာ ချစ်မိနေတော့သည်။ ကျော်ထက်စောင့်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ သူဇာ သည် ခိုင်သူနှင့်ရဲဇော်တို့ အတွဲဘေးမှလမ်းလျောက်ကာ လာနေသည်။ ကျော်ထက်လဲ သူဇာနားသို့အပြေသွားကာ ပြုံးပြပြီးသူဇာဘေးမှကပ်လိုက်လာသည်။ “သူဇာ ကျွန်တော်သူဇာနဲ့ စကားနည်းနည်းလောက်ပြောချင်တယ် ခွင့်ပြုပါလားဟင်” “ကျမရှင်နဲ့ပြောစရာ စကားမရှိဘူး ရှင်ကျမကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ ကျမစာကြည့်တိုက်ထဲမှာ စာဖက်စရာရှိတေးတယ် ကျမ မအားဘူး” “ဟာမမကလဲ ကိုကျော်ထက်ကိုအားနာစရာကြီး မမလဲတစ်ယောက်ထဲနေခဲ့ရမှာကို ကိုကျော်ထက်ရှိတော့ အဖော်ရတာပေါ့မမကလဲ” “ဟုတ်သားပဲ မသူဇာကလဲ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ဒီနေ့လျောက်လည်မှာလေ မမအဖော်မရှိပဲနေမှာပေါ့” “နင်တို့နော် နင်တို့သွားချင်တိုင်း ငါ့ကိုထိုးထည့်နေတယ်” “မမကလဲ မာယာများမနေနဲ့နော် သိပြီးသား ကိုကျော်ထက် မမကိုအပ့်ခဲ့တယ်နော် အဟိ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတော့ ညီမတို့ကတော့သွားပြီ” ပြောပြီးသည်နှင့် ခိုင်သူနှင့်ရဲဇော်တို့နှစ်ယောက် သူဇာ့ကိုထားကာ ပြေးထွက်သွားကြသည်။
ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့နားကပ် ချစ်ခွင့်ပန်ကာ အဖြေတောင်းပြီး စကားပြောရင်း ကျန်နေရစ်ခဲ့သည်။ “တော်တော်ဆိုးတဲ့သူတွေ သူများကိုပစ်ထားခဲ့တယ် ပြန်လာမှတွေ့ဦးမယ်” “သူဇာကလဲ ကိုတစ်ယောက်လုံးရှိပါတေးတယ်ကွာ ကိုကသူဇာနားမှာ အမြဲရှိနေပေးမှာ” “ဟွင့် ရှင့်ကိုဘယ်သူကလိုအပ့်တယ်ပြောလို့လဲ လာလာချည်သေးတယ်” “သူဇာမလိုအပ့်လဲ ကိုကတော့သူဇာ့နားမှာ အမြဲရှိပြီး အမြဲချစ်နေမှာဗျ” “ဟားဟား တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လား စောင့်ကြည့်မယ်လေ” “ကြည့်စေဗျာ ကိုကအမြဲရှိနေမှာ စိတ်ချနော်” ရဲဇော်နှင့်ခိုင်သူတို့သည် ကျောင်းထဲမှထွက်ကာ နေရာတစ်ခုကိုဦးတည်သွားနေကြသည်။ ထိုနေရာကတော့ ရဲဇော်နေသောတိုက်ခန်းလေးပင် ဖြစ်သည်။ ရဲဇော်နှင့်ခိုင်သူတို့မှာ ချစ်သက်တမ်းခြောက်လကျော် ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ရဲဇော်၏ စွဲဆောင်မှုကောင်းသောကြောင့် ချစ်သူဖြစ်ပြီး သုံးလအကြာတွင် ခိုင်သူ့အပျိုစင်ဘဝလေးကို ရဲဇော်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်သည်။ ခိုင်သူသည်chem major ရဲ့ Queen တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ခိုင်သူကတော့ လူတိုင်းနှင့် ဖော်ဖော်ရွေရွေဆက်ဆံတတ်သည်။ လူချစ်လူခင်လည်းများသည် ခိုင်သူ့ကိုလိုက်သည့်လူများလဲ အလွန်များသည်။ ထိုထဲမှ ခိုင်သူ့ကိုစွဲဆောင်နိုင်သော ရဲဇော်ကိုအဖြေပြန်ပေးကာ ချစ်သူအဖြစ်တွဲခဲ့ကြသည်။ ခိုင်သူနှင့်ရဲဇော်တို့သည် တိုက်ခန်းလေးပေါ်သို့တတ်လာကြသည်။ “မောင် မမကအရမ်းမူတာပဲနော် ခိုင်ဆိုရင်မနေနိုင်ဘူး ခဏလေးနဲ့အဖြေပြန်ပေးလိုက်မိမှာ”။
“ဟုတ်တယ်နော်ခိုင် မသူဇာက ချစ်နေတာကိုအရမ်းနေနိုင်တယ်” “ဟုတ်တယ် ကိုကျော်ထက်ကို သနားပါတယ်နော်” “ဟင့်အင်း မောင်ကတော့ ကိုကျော်ထက်ကို အားကျတယ်” “ဟင် ဘာလို့လဲမောင်ရဲ့” “ဟုတ်တယ်လေ မမကအရမ်းလှတယ် ကိုကျော်ထက်က မမအချစ်ကိုရမှာသေချာတယ်လေ မမကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေ ဟုတ်ဘူးလား” “မောင်နော် သူများမမကိုပြစ်မှားနေတယ် ဘာလဲခိုင့်ကိုချစ်ရတာ ရိုးသွားပြီလား” “မဟုတ်ပါဘူးခိုင်လေးရယ် မောင်ကခိုင်းလေးကိုပဲအမြဲချစ်ချင်တာ လာ သက်သေပြမယ်” ရဲဇော်သည် အခန်းသော့ကိုဖွင့်ပြီး ခိုင်သူကိုအထဲသွင်းကာ နှုတ်ခမ်းများကိုနမ်းစုပ်လိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ရဲဇော်လည်ပင်းကိုဖက်ကာ အနမ်းကြမ်းများဖြင့် ပြန်တုန့်ပြန်နမ်းလိုက်သည်။ ရဲဇော်က ခိုင်သူ၏တင်သားများကို စုပ်ကိုင်ကာ အရမ်းတွေဖလှယ်နေကြသည်။ ထဘီပါးပါးလေးအောက်က ခိုင်သူ၏တင်သားများသည် တင်းရင်းကာ ရဲဇော်အတွက် အရမ်းကိုင်ကောင်းနေသည်။ ထိုနောက်ရဲဇော်က ခိုင်သူ့အင်္ကျီလေးမှ ကြယ်သီးများကိုဖြုတ်လိုက်သည်။ ခိုင်သူ့နို့လေးများသည် ထွားလှသောကြောင့် ဘရာလေးထဲမှရန်းထွက်နေသည်။ ရဲဇော်လဲ ခိုင်သူ့ဘရာလေးကို ပင့်တင်ကာ နို့လေးများသို့ လက်တစ်ဖက်က စုတ်နယ်ရင်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းနေသည်။ ထို့နောက်ရဲဇော်သည် ခိုင်သူ့လည်ပင်းသားလေးကို စုပ်ကာ နီနီရဲရဲအမှတ်ကလေးပေးလိုက်သည်။
“မောင် ခိုင့်နို့လေးတွေကိုစို့ပေး မောင်စို့ပေးတာလေးခံချင်လှပြီ ဟင့်ဟင့်” ရဲဇော်ကလဲ ခိုင်သူ့နို့လေးတစ်ဖက်သို့ ကုန်းကာစို့လိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ အရမ်းကောင်းကာ ရဲဇော်နို့လေးစိုပေးနေတာကို မျက်လုံးလေးမှတ်ကာ ခံစားနေသည်။ ခိုင်သူ့နို့သီးခေါင်းလေးကို တစ်ဖက်ကချေပေးရင်း တစ်ဖက်ကစုပ်ကာ နမ်းပေးနေသည်။ ထိုနောက် ရဲဇော်ကကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ကာ ခိုင်သူ့ဗိုက်သားလေးများကို နမ်းပေးလိုက်သည်။ ရဲဇော်က ခိုင်သူ့ထဘီလေးကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက် ခိုင်သူ့ပင်တီလေးပေါ်မှ ဖုတ်လေးကို လျှာလေးနဲ့ထိုးကာ ယက်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ရဲဇော်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ ဖုတ်လေးနှင့်ပွတ်ရင်း ကာမအရသာကိုခံနေသည်။ “မောင် ခိုင့်ဖုတ်လေးကိုယက်ပေး အား…… အရမ်းကောင်းတယ်မောင်” “ခိုင် ပင်တီလေးချွတ်လိုက်နော် မောင်က ခိုင်စောက်စိလေးကို စုပ်ပြီးနမ်းချင်လို့ ” “အား မောင်ကလဲ မောင်ချွတ်ပေးကွာ ဖုတ်ထဲကအရမ်းယားနေပြီ မောင်မြန်မြန်နမ်းပေးတော့ကွာ” ရဲဇော်က ခိုင်သူပင်တီလေးကို ချက်ချင်းချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက်ခိုင်သူ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို လျှာဖြင့်ထိုးကာ ဖွဖွလေးယက်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူလည်း စောက်စိလေးကိုထိမိကာ ကျောထဲကစိမ့်ကာ ကျင်တတ်လာသည်။ ရဲဇော်က ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်လေးကို နဲနဲဖြဲကာ စောက်စိလေးကို လျှာဖြင့်ထိုးယက်လိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ တီကောင်ကိုဆားဖြင့်တို့သလို တွန့်လိမ်ကာ အရမ်းကောင်းနေသည်။ စောက်စိလေးကို စုပ်ကာ ဖုတ်လေးကိုအားရအောင် စုပ်နေတော့သည်။ ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်ထဲမှလဲ စောက်ရည်များထွက်ကာ အရမ်းကောင်းနေသည်။
ခိုင်သူက ရဲဇော်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်လေးနှင့် ပွတ်ကာ ကာမအရသာကို ခံစားနေသည်။ “မောင် ခိုင်းအရမ်းလိုချင်နေပြီ ခိုင်ကိုလိုးပေးပါတော့နော်” “လိုးပေးမှာပေါ့ခိုင်ရဲ့ နံရံကိုမှီပြီးကုန်းလိုက်နော်” “ဟုတ် လာမောင့်အဝတ်စားတွေချွတ်ပေးမယ်” “အတာကြောင့်ခိုင့်ကိုအရမ်းချစ်ရတာ ပြွတ်” ရဲဇော်က ခိုင်သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်သည်။ ထိုနောက်ခိုင်သူက ရဲဇော်ရဲ့အဝတ်စားများကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူသည် ရဲဇော်လီးကြီးဖြင့် ခံနေကြဖြစ်သော်လည်း တောင်နေသောလီးကြီးကိုမြင်ကာ ရင်တွေခုန်နေတော့သည်။ “မောင် မောင့်လီးကြီးက ထောင်မက်နေတာပဲ ပြီးတော့အကြီးကြီးပဲနော်” “ခိုင့်ကိုလိုးချင်နေတာလေ ခိုင်ဟိုဘက်လည့်ပြီးကုန်းပေးတော့နော်” “အား…..အား…..ဖြေးဖြေးထည့်မောင် ခိုင်နာနေသေးတယ်” ရဲဇော်လဲ ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ သူ့လီးကြီးကို ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ရဲဇော်လီးကြီးကိုမျက်စီမှိတ်ကာ ခံပေးနေသည်။ ရဲဇော်က ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်လေးကို ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးလိုက်သည်။ “အား….. အား……. မောင် အရမ်းထိတယ်ကွာ မောင့်လီးကြီးက သားအိမ်ကိုထိထိသွားတယ်” “မောင်လိုးပေးတာ ကြိုက်လားဟင်” “ကြိုက်တာပေါ့မောင်ရဲ့ လိုးလိုး ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေး အား……. အရမ်းကောင်းတယ် အား… အား……. အား………အွင့်……..” “ခိုင် မောင်မောနေပြီကွာ ခိုင်မောင့်ပေါ်ကနေ တတ်ဆောင့်ပေးနော်” “ဆောင့်ပေးမှာပေါ့မောင်ရဲ့ လာလေခိုင်တို့အခန်းထဲ သွားရအောင်” ခိုင်သူက ရဲဇော်လီးကိုကိုင်ကာ အခန်းထဲသို့ ဦးဆောင်ခေါ်သွားသည်။
ရဲဇော်ကလဲ နောက်ကလိုက်ရင်း ခိုင်သူ့ဖင်တွေကို လှမ်းရိုက်လိုက်သည်။ “ဖြန်း….ဖြန်း….အား….အား….” “ခိုင့်အိုးကြီးကို ဘယ်သူကမှ ပြိုအောင်ဖြိုနိုင်မယ် မထင်ဘူးကွာ ခိုင်ကအရမ်းတောင့်တာပဲကွာ” “မောင်ကတော့ပိုပြီကွာ မောင်လိုးတာနဲ့တင် ခိုင်ပုံပျက်တော့မယ် ဟွင့်” ရဲဇော်က ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်အိပ့်ကာ လီးကိုထောင်ပေးထားလိုက်သည်။ ခိုင်သူက ရဲဇော်လီးပေါ်ကို တတ်ခွပြီး လီးကိုကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲသို့ ဆောင့်သွင်းကာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ ထိုနောက်ခိုင်သူက ဆောင့်နေရင် ရဲဇော်နှုတ်ခမ်းတွေကို အားရပါးရနမ်းရင်း ဆောင့်နေသည်။ ရဲဇော်ကလဲ ခိုင်သူဖင်ကြီးကိုကိုင်ကာ အောက်ကနေပင့်ပင့်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ “အား………. အား……… မောင်….. မောင်….. ပင့်ဆောင့်ပေး ခိုင်အရမ်းကောင်းနေပြီ” “ခိုင်းပြီးတော့မှာလားဟင် မောင်လဲအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ” “မောင်…… ခိုင်ပြီးတော့မယ် ကြမ်းကြမ်းလေးဆောင့်ပေး…. အရမ်းကောင်းတယ်… အား……အား…….” ခိုင်သူကလဲ အပေါ်ကခမ်ကြမ်းကြမ် ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ ရဲဇော်က အောက်ပင့်လိုးရင်း နှစ်ယောက်လုံး ကာမအထွဋ်ထိပ့်သို့ ရောက်ကာ ပြိုင်တူပြီးသွားကြသည်။ ခိုင်သူနှင့်ရဲဇော် ပြန်လာချိန်တွင်တော့ သူဇာနှင့်ကျော်ထက်တို့သည် သူမတို့မသွားခင်က ပုံစံမဟုတ်တော့တာကို တအံတသြ တွေ့လိုက်ရသည်။ သူဇာကကျော်ထက်ရင်ခွင်ထဲသို့ ခေါင်းလေးတိုးကာ ချွဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
ကျော်ထက်မျက်နာကလဲ မှိုရတဲ့မျက်နာလို ပြုံးဖြီးနေသည်။ “အမလေး အမလေး ကြည့်ပါဦး ကြည်နှုးနေလိုက်တာ မမ ပြောတော့ကျတော့ ရှင့်ကိုပြောစရာမရှိပါဘူးဆို ခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ” “ခိုင်သူနော် နင်ပဲငါ့ကိုမြှောက်ပေးပြီးတော့ ခုမှလူကိုလာပြီး အပြစ်တင်နေတယ်” “ဟုတ်ပါပြီတော် ကြည်နူးမနေကြနဲ့တော့ ကျောင်းဆင်းချိန်ရောက်နေပြီ ပြန်ကြရအောင်” “အေးပါအေဟဲ့ သူတို့ကကြသာယာလာပြီးတော့ ဟွန့်” “ကို သူဇာတို့မနက်ဖြန်ကြ တွေ့မယ်နော် ကိုအားတယ်မို့လား” “အားတာပေါ့သူဇာရဲ့ သူဇာ့အတွက်ဆို ကို့ဘဝရဲ့အချိန်တွေအားလုံးပေးနိုင်တယ်” “ဟားဟား ပိုတယ်နော် ကိုကျော်ထက်” “ဟုတ်ပါပြီကိုရယ် တာ့တာနော်” ကျော်ထက်သည် သူဇာ့ကိုနှုတ်ဆက်ရင်း ခိုင်သူ့လည်ပင်းထက်မှ အနမ်းကြမ်းကြမ်းကြောင့် စွန်းထင်လာတဲ့ အမှတ်ကိုတွေ့လိုက်သည်။ ရဲဇော်တို့လိုးလာပြီဆိုတာ ကျော်ထက်မပြောပဲသိလိုက်ရသည်။ ကျော်ထက်ကလဲ တစ်နေ့ ခိုင်သူ့ကိုလိုးမည်ဟုကြိတ်ကာပြစ်မှားလိုက်သည်။ သူဇာနဲ့ကျော်ထက် ခိုင်သူနဲ့ရဲဇော်တို့ဟာ ကျောင်းထဲတွင် လူတိုင်းအားကျရတဲ့ အတွဲများဖြစ်လာကြသည်။ ကျော်ထက်နှင့်ခိုင်သူကလဲ အရင်ကထက်ပိုနီးကပ်ကာ ဖင်ပုတ်ခေါင်းပုတ် ပုံစံနှင့်အနေနီးလာကျသည်။ သူဇာနှင့်ရဲဇော်ကတော့ အရင်ကပုံစံတိုင်း ခင်မြဲခင်ကြသည်။ သိုသော် ရဲဇော်စိတ်ထဲတွင် သူဇာကို ကြိတ်၍သဘောကျနေခဲ့သည်။
ရဲဇော်သည် ခိုင်သူနှင့်လိုးသည့် အချိန်များထိပင် သူဇာကိုစိတ်ထဲတွင်မှန်းကာ ခိုင်သူ့ကိုလိုးလာသည်။ ကျော်ထက်ကတော့ ခုချိန်ထိ သူဇာ့ကိုနို့ကိုင်ရုံ နှုတ်ခမ်းလေးနမ်းရုံသာ အခွင့်ရေးရသေးသည်။ ခိုင်သူနှင့်ရဲဇော်ကတော့ အမြဲလိုလို ချိန်းတွေ့ကာ လိုးဖြစ်ကြသည်။ ရဲဇော်ကတော့သူဇာ့ကိုလိုးရန် အခွင့်ရေးကိုစောင့်နေသည်။ တစ်နေ့ သူဇာသည် ခိုင်သူ့ဖုန်းထဲမှ ပုံများကူးရန် ဖုန်းကိုယူကာ ပုံများကူးနေလိုက်သည်။ ထိုချိန်တွင် ခိုင်သူ့ဖုန်းထဲမှ သူဇာ့ရင်ကို ဗြောင်းဆန်သွားစေသော ပုံတစ်ပုံကို အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုပုံထဲတွင် ကျော်ထက်နှင့်ခိုင်သူတို့ အဝတ်စားများမပါပဲ အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင် နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းနေကြသည်။ ထိုပုံမှdateကို သူဇာကြည့်လိုက်သည်။ ကျော်ထက်တစ်ယောက် စောင့်နေကြနေရာမှ သူဇာတို့အလာကို စောင့်နေသည်။ ခဏအကြာတွင် ခိုင်သူတစ်ယောက်ထဲ ကျော်ထက်ရှိရာသို့ ရောက်လာသည်။ “ကိုကျော်ထက် စောင့်နေတာကြာပြီလား ခိုင်သူနဲနဲနောက်ကျသွားတယ်” “မကြာသေးပါဘူး ခိုင်သူရဲ့ ဒါနဲ့သူဇာနဲ့ရဲဇော်ရော” “မပါဘူးကိုကျော်ထက်ရဲ့ မမကနေမကောင်းလို့တဲ့ မောင်ကတော့ရွာပြန်သွားတယ်” “ဟုတ်လား အတာဆို အကိုတို့တော့ ဘက်ပဲ့ပါပြီ” “ခိုင်သူရှိနေတာပဲ ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့ အော် ဒါနဲ့ကိုကျော်ထက် ခိုင်သူ့ကို supermarket လိုက်ပို့ပါလား ကိုကျော်ထက် အားရင်ပေါ့” “အချိန်ရတာပော့ အကိုလဲတစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ သွားကြမယ်လေ” ဆက်ရန်….. ကျော်ထက်ကားလေးနှင့် ခိုင်သူတို့နှစ်ယောက် ကျောင်းထဲမှထွက် လာကြသည်။
လမ်းတွင်ခိုင်သူက ဝိုင်သောက်ချင်သည် ဆိုသောကြောင့် ကျော်ထက်နှင့် ခိုင်သူတို့နှစ်ယောက် ဝိုင်ပုလင်းများနှင့် ဘီယာများဝယ်ကာ အေးဆေးသောနေရာ သို့ထွက်လာကြသည်။ ကျော်ထက်၏ အကြည့်များကို ခိုင်သူရိပ့်မိနေသည်ဖြစ်သည်။ ခိုင်သူသည် နည်းနည်းမူးလာသောကြောင့် စကားပြောများလဲရဲလာခဲ့သည်။ ခိုင်သူ၏စိတ်ထဲတွင်လည်း ကျော်ထက်ကို ကြိတ်ကာကြွေနေသည်။ “ကိုကျော်ထက် ဘယ်လိုလဲ မမနဲ့ကဘယ်အဆင့်ထိ ရောက်နေကြပြီလဲ” “ဘယ်အဆင့်မှ မရောက်သေးပါဘူးဟာ မင့်းမမက အရမ်းမူနေလို့” “ဟားဟား အတာဆို ကိုကျော်ထက်ခုထိမစားရတေးဘူးပေါ့” “အေးပေါ့ဟ မင်းကတော့ ရဲဇော်ကိုပေးတယ်မို့လား ငါသိနေတယ်” “ပေးတယ် ဒါပေမဲ့ ရဲဇော်ကခြေရှုပ်တယ် အပြင်ကလူတွေနဲ့လဲနေတယ် အတာတွေကို ညီမမကြိုက်ဘူး” “ဟုတ်လား မင်းကမထိန်းဘူးလား” “ထိန်းတာပေါ့ ဒါပေမဲ့မရဘူး ညီမသူ့ကိုမကျေနပ်ဘူး လက်စားချေချင်တယ် ကိုကျော်ထက် ကူညီမလား” “ဟင် ငါကဘယ်လိုကူညီရမှာလဲ ဘာလဲ ရဲဇော်ကိုပြောပေးရမှာလား” “ညီမလဲသူ့လို အပြင်မှာနေမယ်လေ ခုတောင်သူ့ရွာဖက်က အဆက်စီသွားတာတဲ့” “ဖြစ်ပါ့မလားဟ သူဇာသိရင် ပြသနာတတ်နေဦးမယ်” “ဟာ ကိုကျော်ထက်ကလဲ မမ မသိအောင်နေမှာပေါ့ ဘာလဲမကူညီချင်ဘူးလား ကိုကျော်ထက်မကူညီနိုင်လဲ ညီမတစ်ခြားတစ်ယောက်စီ သွားလိုက်မယ်”။
“အလိုမဟုတ်ပါဘူးဟာ မသင့်တော်ဘူးထင်လို့ပါ ငါကကူညီချင်ပါတယ်ဟ” ကျော်ထက်လဲ စားရခံကြုံနေသည်မို့ လက်လွတ်မခံပဲ နှစ်ယောက်သား ဟော်တယ်သို့ သွားခဲ့ကြသည်။ ခိုင်သူတစ်ယောက် ဟော်တယ်သို့ရောက်ချိန်တွင် အရမ်းကိုမူးနေပြီဖြစ်သည်။ ခိုင်သူက ရေချိုးချင်သေးသည်ဟု ဆိုကာ ရေချိုးခန်းထဲသို့ ဝင်သွားသည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ကို အပြင်ကစောင့်ရန် ထိုင်နေလိုက်သည်။ ခဏအကြာတွင် ခိုင်သူက တဘက် အပါးလေးကိုပတ်ကာ ပြန်ထွက်လာသည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ကို မျက်လုံးကျွတ်ကျမတတ်ကြည့်နေသည်။ “ကိုကျော်ထက် ခိုင်သူတစ်ယောက်ထဲ ချိုးရမှာ ပျင်းတယ် ကိုကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူနဲ့အတူ ရေလာချိုးလေ” ထိုချိန်တွင် ကျော်ထက်လဲ အချိန်စိုင်းမနေပဲ ခိုင်သူ့နောက်မှလိုက်သွားသည်။ ရေချိုးခန်းထဲတွင် ခိုင်သူက သဘက်လေးကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ အနက်ရောင်အတွင်းခံလေးများနှင့် ခိုင်သူက အရမ်းဆက်စီကျနေသည်။ ကျော်ထက်လဲ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ခိုင်သူ့ခါးလေးကိုဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ပြန်ကာနမ်းသည်။ ကျော်ထက်လက်က ခိုင်သူ့ပင်တီလေးထဲထိုးတာ ဖုတ်လေးကိုပွတ်ကာ စောက်စိလေးကို ချေပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ဖီးတွေတအားထန်ပြီး အရည်တွေပါစိုနေသည်။ ကျော်ထက်လီးကလဲ ဘောင်ဘီထဲမှ ရုန်းထွက်နေသည်။ ခိုင်သူက အလိုက်သိစွာ ကျော်ထက်ဘောင်းဘီကို နမ်းရင်ချွတ်လိုက်သည်။
ဘောင်းဘီထဲမှ ထွက်လာသော ကျော်ထက်လီးကြီးကို ကိုင်ကာဂွင်းထုပေးနေသည်။ ခိုင်သူက အနမ်းကိုရပ်လိုက်ပြီး ကျော်ထက်ရင်ဘက်ကို နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် ကပ်ကာ လိုက်နမ်းလိုက်သည်။ ထိုနောက်ခိုင်သူက အောက်သို့ဒူးထောက်ထိုင်ကာ ကျော်ထက်လီးကို နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် ပွတ်ကာပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက်နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် ကျော်ထက်လီးဒစ်ကို ငုံကာစုပ်လိုက်သည်။ ခိုင်သူက လီးဒစ်လေးကို လျှာနှင့်ပတ်ကာ မွှေကာစုပ်နမ်းပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူစုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းသောကြောင့် မျက်လုံးကိုမှိတ်ကာ ကာမအရသာကို ခံစားနေသည်။ အား…….အား……….အရမ်းကောင်းတယ် ခိုင်သူရယ် မင်းကအရမ်းစုပ်တတ်တာပဲကွာ” “မင်းနှုတ်ခမ်းလေးကိုတော့ စွဲသွားပြီး ခိုင်သူရယ်” ကျော်ထက်လဲ အရမ်းအရှိန်တတ်ကာ ခိုင်သူ့ခေါင်းကိုကိုင်းပြီ လီးကြီးကိုစောင့်စောင့်ထည့်နေလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်ပေါင်ကိုကိုင်ကာ လီးကြီးကို အဆုံးထိရောက်အောင် စုပ်ပေးနေသည်။ ကျော်ထက်က လီးကြီးကို ခိုင်သူ့ပါစပ်ထဲ အဆုံးထိဝင်အောင် ထည့်ကာ ညောင့်လိုးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ အရမ်းကောင်းကာ ခိုင်သူ့ပါးစပ်ထဲသို့ လရည်များပန်းထုပ်လိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ထွက်လာသောလရည်များကို အကုန်စင်အောင် မျိုချလိုက်သည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ကိုထူကာ သူ့လီးကြီးကိုစုပ်ထားသော နှုတ်ခမ်းများကို တတ်မက်စွာ စုပ်နမ်းလိုက်သည်။
ထိုနောက် ခိုင်သူနှင့်ကျော်ထက်တို့သည် ရေစိမ်ကန်တွင် ရေစိမ်ရင်း ရေချိုးကာဇိမ်ခံနေကြသည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးနေသည်။ လက်တစ်ဖက်ကလဲ ခိုင်သူ့နို့လေးများကို စုတ်ကိုင်နေသည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်ဘက်သို့စောင်းကာ နှုတ်ခမ်းများကို စုပ်ကာနမ်းနေသည်။ ခိုင်သူသည် စောက်ဖုတ်လေးသို့ရောက်နေသော ကျော်ထက်လက်များကို ပွတ်ကာ ကာမအရသာကိုခံစားနေသည်။ ကျော်ထက်လဲ လက်နှစ်ချောင်းပူးကာ ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ ထိုးကာမွှေပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်လေးမှာ ကျော်ထက်လက်ကို အထဲမှနေ၍ ညစ်ပေးနေသည်။ ကျော်ထက်လဲ စောက်ဖုတ်လေးကို ခမ်ကြမ်းကြမ်းမွှေပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲအရမ်းကောင်းကာ ကော့ပျံနေတော့သည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူဖုတ်လေးထဲမှ လက်ကိုနုတ်ကာ စောက်စိလေးကို ဖိကာပွတ်ပေးလိုက်ချိန်တွင် ခိုင်သူလဲ ကာမအရသာရဲ့ အထွဋ်ထိပ့်ကိုရောက်ကာ ပြီးသွားသည်။ ထိုနောက် ခိုင်သူနှင့်ကျော်ထက်လဲ တဘက်လေးများကို ပတ်ကာ အိပ့်ယာပေါ်တွင်ဖက်ရင်း အမောဖြေကာအနားယူနေကြသည်။ ထိုချိန်တွင်ခိုင်သူက “ကိုကို ခိုင်သူဖုတ်လေးကို ကိုကို့နှုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့ အနမ်းပေးပါဦးနော်” ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့တဘက်လေးကိုဖြည်ကာ စောက်ဖုတ်ထက်က ဆီးဂုံထက်ပိုင်းလေးကို စနမ်းလိုက်သည်။ ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးက ရဲဇော်လိုးထားသောလဲ ပုံတော့သိပ့်မပျက်သေးပေ။ ဖုတ်လေးမှာ ဖောင်းဖောင်းလေးနှင့် ချစ်ဖို့ကောင်းနေသည်။
ခိုင်သူကလဲ ပေါင်လေးကိုကားပေးလိုက်ပြီး ကျော်ထက်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ ဖုတ်လေးဖြင့်ကော့ကာ ပွတ်နေသည်။ “ကိုကို” “ဟင် ပြောလေ ခိုင်သူရဲ့” “ကိုကိုကပက်လက်လေးနေပေး ခိုင်သူက ကို့ကိုနှုတ်ခမ်းလေးပေါ်ကို ဖုတ်လေးနဲ့ပွတ်ပြီး အရသာခံချင်လို့” “လုပ်လေခိုင်သူရဲ့ ခိုင်သူကအရမ်းလုပ်တတ်တာပဲကွာ” ကျော်ထက်လဲ အိပ့်ရာပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်ပေါ်လို့ခွကာ မျက်နာပေါ် ဖုတ်လေးနှင့် ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးကို လျှာလေးနဲ့ထိုးကာ ယက်ပေးနေလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲအရမ်းဖီးများတတ်ကာ သူ့နို့များကိုပြန်ကာ နယ်ရင်းပွတ်နေလိုက်သည်။ “ကိုကို ခိုင်သူမနေနိုင်တော့ဘူးကွာ ကိုကိုလုပ်ပေးတော့” ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ကို လဲပြီးတော့ အပေါ်မှ လှေကြီးထိုးရိုးရိုပုံစံနှင့် တန်းလိုက်လိုက်သည်။ ခိုင်သူ့အဖုတ်မှာ အရင်ထဲက အရည်တွေစိုနေပြီမို့ လိုးရတာအရမ်းကောင်းနေသည်။ ခိုင်သူ့ဖုတ်ကလဲ အရမ်းညစ်အားကောင်းသောကြောင့် အပျိုလိုးရတာထက်ပင် ပို၍ကောင်းနေသည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်လည်ပင်းကိုဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းများကို အတင်းနမ်းနေသည်။ “အား…….အား…… “ခိုင်သူရယ် မင်းဖုတ်လေးက အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ မင်းဖုတ်လေးကို အမြဲလိုးချင်တယ်ကွာ ကိုကိုပဲအမြဲလိုးနော် ကိုကို့လီးကြီးကိုကြိုက်တယ် အား…. အား…. ဆောင့်လိုးပေး…. အား…… အရမ်းကောင်းတယ်..အရမ်းကောင်းတယ် ခိုင်သူရယ်။
မင်းဖုတ်လေးနဲ့ညှစ်ပေး အား….. ကောင်းလိုက်တဲ့ဖုတ်လေးကွာ” “အား….. လိုး……. လိုး…. ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေး အရမ်းကောင်းတယ် ” အား…… အား….. ခိုင်သူပြီးတော့မယ် အား…….”ကောင်းလားခိုင်သူ ငါလိုးပေးတာကောင်းလား” “အား…. အား….. အွင်း…….. အွင်း…….. ခိုင်သူပြီးပြီး အရမ်းကောင်းတယ်ကိုကိုရယ်” ကျော်ထက်ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းဖြင့် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်သောကြောင့် ခိုင်သူခဏလေးတင်ပြီးသွားသည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူပေါ်တွင်မှောက်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်းဂဟေဆက်ကာ အနမ်းပေးရင်းအမောဖြေနေကြသည်။ ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးသည် လီးကြီးကိုညစ်ကာ ကာမအရသာများကို အပြည့်ဝခံစားနေသည်။ ခိုင်သူတစ်ချီပြီးသွားသော်လည်း ကျော်ထက်လီးကြီးက တောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ “ကိုကို ကိုကိုမပြီးတေးဘူးလားဟင်” “မပြီးတေးဘူးလေ ခိုင်သူရဲ့” “အတာဆို ကိုကိုဆက်လိုးလေ ခိုင်သူဘယ်လိုနေပေးရမလဲဟင်” “ခိုင်သူ့ကို ရဲဇော်က ဖင်လိုးပြီးပြီလားဟင်” “ဟင့်အင်း မလိုးပါဘူးကိုကိုရဲ့ ဘာလဲကိုကိုကဖင်လိုးမလို့လား” “ဟုတ်တယ် ကိုကိုခိုင်သူ့ဖင်ကိုလိုးချင်လို့” “ဟင့်ဟင့် ခိုင်သူနာမှာကြောက်တယ်” “မနာပါဘူး ခိုင်သူရဲ့” “ခိုင်သူကြောက်တယ် ကို့ကိုလီးကြီးက အကြီးကြီပဲ” “ဖြေးဖြေးလေးပဲ လုပ်မယ်နော် ခိုင်သူမခံနိုင်ရင် ဆက်မလုပ်ဘူးနော်” ခိုင်သူလဲ ရဲဇော်ကိုအရွဲတိုက်ချင်တာနှင့် ကျော်ထက်ကို ဖင်လိုးခံရန် အသင့်ပြင်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ဖင်လေးကိုဖြဲကာ ဖင်ပေါက်လေးထဲကို တံတွေးထွေးထည့်လိုက်သည်။ ပြီးမှလက်တစ် ချောင်းစထိုးလိုက်သည်။
ခိုင်သူ့ဖင်လေးက ပါကင်လေးမို့ ကြပ်နေသည်။ ကျော်ထက်လဲ လက်ချောင်းလေးနှင့် ခိုင်သူ့ဖင်လေး အဝင်ထွက်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက် လက်တစ်ချောင်းထဲနှင့် အသွင်းထုပ်ကောင်းချိန်တွင် လက်နှစ်ချောင်းဖြင့်ထိုးကာ ချဲ့ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ စိတ်ထဲတွင်မရိုးမယွဖြစ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲမှ ယားတတ်လာသည်။ “ကိုကို ခိုင်သူ့ဖင်ကိုလိုးပေးတော့ ခိုင်သူအရမ်းခံချင်နေပြီကွာ” “လိုးပေးမှာပေါ့ ခိုင်သူရဲ့ ဖင်လေးကိုဖြဲပေးထားနော်” ကျော်ထက်က ခိုင်သူဖြဲပေးထားသော ဖင်လေးကို လီးဒစ်ကြီးဖြင့်တေ့လိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ဖင်းကြီးကို လိုးကောင်းစေရန် ပြဲသထက်ပြဲအောင် ဖြဲပေးထားသည်။ ကျော်ထက်သည် ခိုင်သူ့ဖင်ကို တံတွေးနည်းနည်းစွတ်ကာ လီးဒစ်ကြီးထိုးစိုက်ပြီး လိုးလိုက်သည်။ “အား…….အား……..ကိုကိုဖြေးဖြေး” ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ဖင်လေးထဲသို့ အားစိုက်ကာ ထပ်ထိုးချလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ အရမ်းနားသွားသောကြောင့် ကော့ပျံသွားသည်။ ထို့နောက် ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ပေါ်သို့ မှောက်ကာ လည်ဂုတ်သားလေးကိုနမ်းရင်း နို့လေးစိုကချေကာ ညှောင့်ပေးနေလိုက်သည်။ ခိုင်သူက ခဏအကြာတွင် နောက်သို့ပြန်ကာ ဆောင့်ဆောင့်ပေးလာသည်။ ခိုင်သူကောင်းနေတာကိုသိသော ကျော်ထက်က ခိုင်သူခါးလေးကိုကိုင်ကာ ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ အရမ်းကောင်းကာ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်လေးများဖြင့်ပွတ်ကာ ကျော်ထက်ဆောင့်သမျှကို ခံနေသည်။
“အား……. အား……. ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ် ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးထဲလဲ အရမ်းယားတာပဲ” “အား…….. အား……… မင်းဖင်လေးကစီးနေတာပဲကွာ လိုးရတာအရမ်းကောင်းတာပဲ ခိုင်သူလဲ ပြန်ဆောင့်ပေးလေ” “ကိုကိုမောနေပြီလားဟင် ခိုင်သူအပေါ်ကတတ်ဆောင့်ပေးမယ်လေ” “ကောင်းတာပေါ့ခိုင်သူရဲ့ လာ ခိုင်သူက အရမ်းအလိုက်သိတာပဲကွာ” ခိုင်သူက ကျော်ထက်ပေါ့သို့ခွကာ ထောင်ပေးထားသော လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ဖင်ထဲတေ့ကာ ဆောင်ကာထိုင်ချလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ အောက်မှနေ၍ ခိုင်သူ့နို့လေးများကို ကိုင်နေလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ ဖုတ်လေးကိုပွတ်ကာ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေလိုက်သည်။ ကျော်ထက်နဲ့ခိုင်သူလဲ မီးကုန်ရမ်းကုန်းလိုးလိုက်ကြသည်။ ခိုင်သူက အပေါ်ကဆောင့်နေရင်း ၁၅မီးနစ်အကြာတွင် ပြီးသွားသည်။ ကျော်ထက်လည်း အောက်ကထပ်ဆောင့်ရင်း ခဏကြာတွင် ပြီးသွားတော့သည်။ ရဲဇော်လဲ ကျောင်းကအပြန်တွင် ရေးမိုးချိုးကာ အနားယူရင်း အခန်းထဲတွင် တစ်ယောက်ထဲ အချစ်တက္ကသိုလ်မှစာများကို ဖက်နေသည်။ ထိုချိန်တွင် အခန်းရှေ့မှ လူခေါ်ဘဲလ်တီးသံ ကြားလိုက်ရသည်။ ရဲဇော်လဲ ပုဆိုးကို သေချာပြင်ဝတ်ပြီး အခန်းတခါးကို သွားဖွင့်လိုက်သည်။ “ဟာ မသူဇာ ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟင်” ရဲဇော်သည် သူဇာ့ကိုမြင်သည်နှင့် ကာမစိတ်များတတ်ကြွလာသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဇာက မြန်မာဝတ်စုံလေးနှင့် နို့များတင်များက တင်းရင်းကာ ယောက်ျားသားတိုင်း မျက်စီကျလောက်အောင် လှနေသည်။ ထို့နောက် ရဲဇော်လဲ သူဇာ့ကိုအခန်းထဲခေါ်ကာ ဧည့်ခံစားပွဲတွင် ထိုင်ကာဆက်မေးလိုက်သည်။
“မသူဇာ ဘာဖြစ်လာတာလဲဟင် မျက်နာလဲမကောင်းပါလား” “မမ ကျော်ထက်နဲ့ ရန်ဖြစ်လာတယ် ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ” “ဘာကြောင့်လဲမသူဇာရဲ့ ကိုကျော်ထက်က ဘာအမှားလုပ်မိလို့လဲ” “အမှားလုပ်တာပေါ့ အကြီးကြီးကိုမှားတာ သူမမကွယ်ရာမှာ ဖောက်ပြန်တယ်လေ ” “ဟာ ဟုတ်လားမသူဇာရဲ့ ဘယ်သူနဲ့လဲ” “မင်းအံသြသွားမလားတော့မသိဘူး မင်းချစ်သူခိုင်သူနဲ့ဖောက်ပြန်တာ ” “ဗျာ ခိုင်သူနဲ့ဟုတ်လား လုပ်ရက်လိုက်တာဗျာ” ရဲဇော်လဲ ခေါင်းကိုငိုက်စိုက်ကျသွားသည်။ သူအပြင်မှာ ခြေရှုပ်တာမှန်သော်လည်း ခိုင်သူထိုကဲ့သို့ လုပ်လိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့ ခုတော့ရဲဇော် ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ ။ သူဇာက ရဲဇော်ကိုစိုက်ကာ ကြည့်နေသည်။ ရဲဇော်ခေါင်းကိုမော့ကာ သူဇာကိုကြည့်လိုက်ချိန်တွင် နှစ်ယောက်သား မျက်လုံးချင်းဆုံသွာသည်။ သူဇာက ရှက်ပြုံးလေးနှင့် ခေါင်းကိုပြန်ငုံ့သွားသည်။ ကျော်ထက်လဲ ထိုအခြေနေကို သဘောပေါက်သွားပြီ ဖြစ်သည်။ ရဲဇော်ကြိတ်ကာ ကြွေနေသောဆော်ကြီးက ရှေ့တွင်အထာလာပေးတော့ ရဲဇော်လဲ အမိဖမ်းဖို့ ပြင်လိုက်တော့သည်။ ထိုနောက် ရဲဇော်လဲ သူဇာထိုင်နေသောဘက်သို့ ပြောင်းထိုင်လိုက်သည်။ “မသူဇာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် သူတို့ကို လကစားချေကြရအောင်” “ဟင် မင်းကဘယ်လို လက်စားချေမှာလဲကွ ပြောပြလေ မမလဲလက်စားချေချင်တယ်” “ဟာမမကလဲ လွယ်ပါတယ် သူတို့နှစ်ယောက်လို ကျွန်တော်တို့လဲနေကြမယ်လေ” “ဟာမင်းကလဲကွာ” သူဇာရှက်ကာ ခေါင်းလေးကိုငုံကာ လက်လေးနှစ်ဖက်ကို စုတ်ကိုင်ပါနေသည်။ တကယ်တော့ သူဇာလဲ ရဲဇော်နှင့်အတူတူနေရန် လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရဲဇော်လဲ သူဇာ့ကို ပခုံးလေးမှစဖက်ကာ ရင်ခွင်ထဲကို ထည့်လိုက်သည်။ သူဇာကလဲ အလိုက်သင့်လေး ရဲဇော်ရင်ခွင်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ရဲဇော်က သူဇာ့ခေါင်းလေးကိုမော့ကာ နှုတ်ခမ်းလေးကိုစနမ်းလိုက်သည်။ သူဇာလဲ ရဲဇော်ပေးသော အနမ်းများကိုခံယူရင်း ရဲဇော်ကိုဖက်ကာ အနမ်းများကိုပြန်ပြီး နမ်းလိုက်သည်။ ရဲဇော်လက်များကလဲ သူဇာထဘီးလေးပေါ်မှ ပေါင်ကိုပွတ်ကာ ရက်မက်ပြင်းပြင်းဖြင့် နမ်းနေကြသည်။ ထိုနောက် သူဇာ့ပေါင်ကြား ရောက်သွားပြီး ထဘီးပေါ်မှ ဖုတ်လေးရှိရာသို့ ပွတ်လိုက်သည်။ သူဇာလဲ အပျိုဖုတ်လေးကို ကိုင်ခံလိုက်ရသောကြောင့် ကြက်သီးများထကာ သွားသည်။ ရဲဖော်ရဲ့ပွတ်ပေးမှုကြောင့် သူဇာလဲရဲဇော်ကို တအားဖက်ကာ ထားလိုက်သည်။ ထိုနောက်ရဲဇော်က သူဇာ့လည်ပင်းလေးကို ဆင်းကားနမ်းပေးလိုက်သည်။ သူဇာလဲ တခါမှမခံစားဖူးတဲ့ အနမ်းမို့ကြက်သီးမွှေးညင်းပါ ထသွားသည်။ သူဇာကလဲ ရဲဇော်ပေါင်းကြားသို့ လက်ရောက်သွားပြီး ရဲဇော်လီးကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှကိုင်ကာ ထုပေးနေလိုက်သည်။ ကျော်ထက်ကို ထုပေးနေကြမို့ သူဇာကအလိုက်သိ ထုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနောက်ရဲဇော်က သူဇာရင်ဖုံး အင်္ကျီလေးမှ ကြယ်သီးလေးများကိုဖြုတ်ပေးလိုက်သည်။ သူဇာမှာ ဘော်လီအနီရောင်လေးနှင့် အရမ်းစွဲဆောင်မှူ ကောင်းနေသည်။ ရဲဇော်ကလဲ သူဇာ့နို့လေးများကို ဖွဖွလေးကိုင်ကာ ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက်ရဲဇော်က သူဇာ့ကိုဖက်ကာ ဘော်လီချိတ်လေးကို ဖြုတ်လိုက်သည်။ သူဇာနို့လေးများမှာ အပျိုနို့လေးမို့ တင်းရင်းကာ လုံးကျစ်နေသည်။
သူဇာလဲ နည်းနည်းရှက်သွားကာ ရဲဇော်ကို မျက်နာမမြင်အောင် ဖက်ထားလိုက်တော့သည်။ ရဲဇော်ကတော့ သူဇာ့နို့လေးများကို ကုန်းကာစို့လိုက်သည်။ ထိုနောက်ရဲဇော်က သူဇာ့ကိုချီကာ အခန်းထဲသို့ခေါ်သွား လိုက်တော့သည်။ ရဲဇော်ကသူဇာ့ ထဘီးလေးကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ပင်တီအနီရောင်လေးနှင့် ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေသော သူဇာ့ဖုတ်လေးက ရဲဇော်ရဲ့ကာမ ရမက်ကို ပို၍ထန်လာစေသည်။ သူဇာ့ပင်တီလေးမှာလဲ အဖုတ်လေးမှထွက်လာသော အရည်များနှင့် စိုရွဲကာနေသည်။ ရဲဇော်ကလဲ သူဇာ့ဖုတ်လေးကို ပင်တီလေးပေါ်မှ ဖိကာနမ်းလိုက်သည်။ သူဇာက စောက်ဖုတ်လေးကို ခုမှပထမဆုံး နမ်းခံရသည်ဖြစ်သောကြောင့် တွန့်တွန့်လူးကာ သွားသည်။ ရဲဇော်က သူဇာ့ဖုတ်ကွဲကြောင်းလေးကို ပင်တီလေးပေါ်မှ ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူဇာ့ပင်တီလေးကိုချွတ်ကာ စောက်စိလေးကို ငုံစုပ်လိုက်သည်။ သူဇာလဲ ရဲဇော်ခေါင်းလေးကို ကိုင်ကာ ရဲဇော်စုပ်နမ်းကာဂျာပေးသမျှကို မှိန်းကာခံနေသည်။ ထိုနောက် “ရဲဇော်ရယ် မမကိုချစ်ပေးပါတော့ကွာ မမပန်းလေးထဲက အရမ်းယားနေပြီကွာ” “လိုးပေးမှာပေါ့မမရဲ့ ဒါပေမဲ့ မမကပြောင်းပြောပေးနော် မမပြောတာလေး နားထောင်ချင်လို့” “ဟာကွာ ရဲဇော်ကလဲ တအားညစ်တာပဲ ကဲ မမကိုလိုးပေးပါတော့ကွာ မမခံချင်လှပြီ” “ဒီလိုမှပေါ့မမရဲ့ မမပေါင်လေးကားထားနော်” သူဇာလဲ ရဲဇော်ပြောသည့်အတိုင်း ပေါင်လေးကို ကားထားပေးလိုက်သည်။ ရဲဇော်က စောက်ရည်တွေနှင့် စိုရွဲနေသော သူဇာ့စောက်ဖုတ်လေးထဲကို သူ့ဒစ်ဖူးကြီးကို ထိုးထည့်လိုက်သည်။
“အား….. မောင်….. နာတယ်ကွာ ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ” “မမက ခုမှအပျိုပဲရှိတေးတာလားဟင်” “ဒါပေါ့ကွ မမဘယ်သူနဲ့မှ မခံဘူးသေးဘူး” “ဟာ ကျွန်တော်အရမ်း ကံကောင်းတာပဲဗျာ မမကိုအရမ်းချစ်သွားပြီးဗျာ” ရဲဇော်လဲအရမ်းပျော်ကာ သူဇာ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းရင်း လီးကြီးကိုညှောင့်ကာ သွင်းလိုက်သည်။ သူဇာလဲ သူမ၏ အပျိုစောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ တိုးဝင်လာသော လီးကြီးဒဏ်ကိုကြိတ်ခံရင်း ရဲဇော်ကိုတအားဖက်ထားလိုက်သည်။ ရဲဇော်လဲ သူဇာကို ဖြေးဖြေးညှောင့်ကာလိုးရင်း လီးကြီးကို အဆုံးထိရောက်အောင် လိုးလိုက်သည်။ ထိုနောက် လီးကြီးကို ညှောင့်ကာလိုးရင်း သူဇာခံနိုင်ချိန်မှ လီးကြီးကို တစ်ဝက်လောက်ထိထုပ်ကာ ခပ်စပ်စပ်လေး ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ “အား…… အား…… မောင့်လီးကြီးက အကြီးကြီးပဲကွာ မမစောက်ဖုတ်လေးထဲမှာ ပြည့်ကြပ်နေတာပဲကွာ” သူဇာလဲ ပေါင်ကိုးပေးထားရင်း ရဲဇော်လိုးသမျှကို ပါစပ်မှတတွတ်တွတ်ပြောရင်း အလိုးခံနေသည်။ ရဲဇော်လဲ သူဇာခံနိုင်ပြီးဆိုတာ သိသောကြောင့် အားဖြင့် ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ လိုပြစ်လိုက်သည်။ “အား…..အား…… အား… “ကောင်းလိုက်တာမမရယ် မမစောက်ဖုတ်းလေးက စီးကြပ့်နေတာပဲဗျာ” “မမလဲအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ လိုးလိုး ဆောင့်ဆောင့်လိုပေး မင်းလီးကြီးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်” ထိုနောက်ရဲဇော်လဲ သူဇာ့ကို ကုန်းခိုင်းကာ နောက်မှဆောင့်လိုးရန် ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ သူဇာလဲ ကုတင်ပေါ်တွင် လက်ထောက်ကာ ရဲဇော်အလိုးကိုခံရန် ကုန်းပေးလိုက်သည်။
နောက်သို့ဖောင်းကာ ထွက်လာသော သူဇာ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ရဲဇော်က အနမ်းတစ်ချက်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးမှလီးကြီးကိုကိုင်ကာ သူဇာ့စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ထိုးထည့်ကာ ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ရဲဇော်က သူဇာ့ဖင်ကြီးကိုကိုင်ကာ နောက်မှ တအားဆောင့်ကာဆောင့်ကာ လိုးနေသည်။ သူဇာ့ဖင်ကြီးကလဲ ရဲဇော်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ခါရမ်းကာနေသည်။ ရဲဇော်ဆောင့်အားကြောင့် သူဇာလက်ပင် မထောက်ထားနိုင်တော့ပဲ ဖင်ကြီးကိုထောင်ကာ ဝတ်ပြီးခံနေလိုက်သည်။ အား… အား…… အား….. “ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် လိုး လိုး အားရပါးရ လိုး”အား…… ကောင်းလိုက်တာမမရယ် မမလဲပြန်ဆောင့်ပေးနော် မမဖင်ကြီးကအယ်နေတာပဲ အရမ်းလိုးလိုးကောင်းတာပဲ”သူဇာလဲ ရဲဇော်ပြောတဲ့အတိုင်း ဖင်ကြီးဖြင့်ပြန်ကာ ဆောင့်ဆောင့် ပေးလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်ထဲမှာလဲ သူဇာ့စောက်ရည်တွေကြောင့် အသံမျိုးစုံထွက်နေသည်။ ရဲဇော်အခန်းလေးမှာလဲ လူနှစ်ယောက်လိုးသံများနှင့် ဆူညံနေသည်။ “မမ အပေါ်ကနေ တတ်ဆောင့်ပေးပါလား မမနို့တွေကိုဆွပြီး ကိုင်ချင်လို့” “အတာဆို ပက်လက်လှန်လိုက်လေမောင်ရဲ့ မမတတ်ဆောင့်ပေးမှာပေါ့” ရဲဇော်လဲ ပက်လက်လှန်ကာ လီးကိုကိုင်ပြီး ထောင်ပေးလိုက်သည်။ သူဇာက ရဲဇော်ပေါ်သို့ခွကာ စောက်ဖုတ်နှင့်လီးကိုတေ့ကာ ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ရဲဇော်က အပေါ်ကနေဆောင့်ပေးနေသော သူဇာ့နို့တွေကိုဆွဲကာ သူဇာဆောင့်ပေးသမျှကို ခံစားနေသည်။
အား………. ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ် အောက်ကနေပြန်ဆောင့်ပေး မမပြီးတော့မယ်”ရဲဇော်ကလဲ အောက်ကနေပြီး ပင့်ကာဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ သူဇာလဲ ပြီးခါနီးသောကြောင့် စောက်ရည်များပို၍ ထွက်လာသည်။ သူဇာလဲ ရဲဇော်ပေါ်မှ ၁၅ ချက်ခန့် ဆောင်ကာ ပြီးသွားတော့သည်။ ရဲဇော်က သူဇာသွားပြီးသွားသော်လည်း အောက်ကနေဆက်ကာ ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ ထိုချိန်တွင်သူဇာက ရဲဇော်ပေါ်သို့မှောက်ကာ အမောဖြေနေသည်။ ရဲဇော်က သူဇာ့နားကပ်ကာ လီးစုပ်ပေးရန် ပြောလိုက်သည်။ သူဇာကလဲထကာ စောက်ရည်များနှင့် ပြောင်လက်နေသော ရဲဇော်လီးကြီးကို ကိုင်ကာစုပ်ပေးလိုက်သည်။ ရဲဇော်က သူဇာ့ခေါင်းကိုကိုင်ကာ လီးကြီးကို အဆုံးထိထိုးကာ သူဇာ့အားခေါင်ထဲတွင် စိမ်ထားလိုက်သည်။ သူဇာ့မျက်နာတစ်ခုလုံး နီရဲတတ်လာသည်။ ရဲဇော်ကလဲ သူဇာ့အားခေါင်ထဲတွင် လရည်များကို ပြန်းထုပ်လိုက်သည်။ ရဲဇော်လရည်များသည် အထိန်ကွတ်မရှိပဲ သူဇာ့ပါစပ်ထဲသို့ အကုန်ထည့်လိုက်တော့သည်။ “သူဇာ ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ ကို့ကိုခွင့်လွတ်ပါနော်” “ဟားဟား ရော့ သူဇာ့ဖုန်းကိုကြည့်ပြီးမှ တောင်းပန်တာဆက်ပြော” ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့ဖုန်းကိုယူကာ သူဇာပြသောပုံကိုကြည့်လိုက်သည်။ ကျော်ထက်ဖုန်းကိုကြည်ကာ အရမ်းအံသြသွားသည်။ ဖုန်းထဲတွင် သူဇာက ရဲဇော်ရင်ခွင်ထဲတွင် အဝတ်စားမပါပဲ ဖက်ကာအိပ့်နေသည်။ ကျော်ထက်လဲ နောက်ပုံများကို ဆက်ကာကြည့်လိုက်သည်။
နောက်ပုံထဲတွင် သူဇာက ရဲဇော်လီးကြီးကို တတ်မက်စွာ စုပ်ပေးနေသည်။ ရဲဇော်က သူဇာ့စောက်ဖုတ်ယက်ပေးနေပုံများကိုလဲ သေချာပီပြင်စွာရိုက်ထားသည်။ သူဇာရယ် လုပ်ရက်လိုက်တာကွာ” “ကိုအရင်လုပ်ခဲ့တာပါ သူဇာ့အပျိုစင့်ဘဝက ကိုနဲ့မတန်လို့ သူများကိုပေးလိုက်တာ” “ဟုတ်ပါပြီသူဇာရယ် သူဇာကျေနပ်တယ်ဆိုရင် ကိုလဲကျေနပ်ပါတယ်” “ဟုတ်ပါပြီ သူဇာမနေ့ညထဲက ခုထိအိမ်မပြန်ရတေးဘူး အိမ်ပြန်ပြီးရေမိုးခိုးခဲ့ဦးမယ် ပြီးမှတွေ့တာပေါ့” “ဟင် ဒါဆိုသူဇာက ရဲဇော်စီကနေ ခုမှပြန်လာတာပေါ့”။ “ဟုတ်တယ်လေကိုရဲ့ ရဲဇော်ကအရမ်းလုပ်နိုင်တာပဲ တညလုံးဆက်တိုက်သူဇာ့ကို လုပ်လိုက်တာ ပေါင်တောင်နဲနဲကွနေတယ်” “ဟုတ်ပါပြီသူဇာရယ် သူဇာအိမ်ပြန်မနေနဲ့တော့လေ အိမ်ပြန်ရင်တခြားလူတွေရိပ့်မိနေမယ် ကိုနဲ့တူတူ ဟော်တယ်မှာ သွားနားကြမလား” “Ok လေ သွားကြတာပေါ့” သူဇာလဲ ကျော်ထက်အပေါ် လွန်သွားသောကြောင့် ကျော်ထက်အကြံကနု သိသော်လဲ ဟော်တယ်ကိုလိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ သူအကြိမ်ကြိမ်ရယူရန် ကြိုးစားခဲ့သော သူဇာ့အပျိုစင်ဘဝလေးကို လက်လွတ်လိုက်ရသောကြောင့် သူဇာ့အားငြိုးကာ ဟော်တယ်ခေါ်ပြီး တဝကြီးလိုးရန် ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူနှင့်သွားခဲ့သော ဟော်တယ်သို့ ခေါ်သွားလိုက်သည်။ ဟော်တယ်သို့ရောက်သော်….. “ကို သူဇာရေအရင်ချိုလိုက်ဦးမယ် ရဲဇော်တညလုံးပွကြမ်းထားတာ ရေတောင်မဆေးရတေး” “သူဇာရယ်ကိုမဆောင့်နိုင်တော့ဘူးကွာ လာပါချစ်ကြရအောင်” ကျော်ထက်လဲ ရဲဇော်သူဇာ့လိုးတဲ့အကြောင်းကို ကြားနေရင်းကို ကာမစိတ်တွေ တတ်လာနေသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ သူဇာ့ပွဲကြမ်းကာလိုးမည်ဟု ကြိတ်ကာဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သူဇာလဲ ရဲဇော်တစ်ညလုံး လိုးထားသော်လဲ ကာမစိတ်များက မပျောက်သွားပဲ တတ်တတ်လာသည်။ သူဇာလဲအရမ်းရွလာကာ ကျော်ထက်ဘောင်းဘီကို ချွတ်ကာ တောင်နေသောလီးကြီးကို စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့နှုတ်ခမ်းလေးရဲ့ နွေးထွေးတဲ့အရသာကို မျက်လုံးကိုမှိတ်ကာ ခံစားနေသည်။ သူဇာလဲ ကျော်ထက်လီးကြီးကို ကိုင်ကာ ဒစ်ဖူးလေးကိုငုံပြီး သေချာစုပ်ပေးလိုက်သည်။ “အား……….. စုပ်တတ်လိုက်တာ သူဇာရယ် အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ” သူဇာလဲရဲဇော်လီးကြီးကို အဆုံးထိရောက်အောင် စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လီးက ကြီးလွန်းသောကြောင့် သူဇာ့ပါစပ်ထပြည့်ကာ လျှံထွက်နေသည်။ အား………… ကောင်းလိုက်တာကွာ သူဇာ ကို့ဥတွေရောစုပ်ပေးကွာ” သူဇာလဲ ကျော်ထက်ပြောသလို ဥတွေကိုပါစုပ်ပေးလိုက်သည်။ လက်ကလဲ ကျော်ထက်လီးကြီးကို ကိုင်ကာ ထုပေးရင်း ဥတွေကိုပါစုပ်ပေးလိုက်သည်။ “သူဇာရယ်… ကိုမနေနိုင်တော့ဘူးကွာ လိုးကြရအောင်နော်” သူဇာမက်တတ်ရပ်လိုက်သည်နှင့် ကျော်ထက်က သူဇာ့ကိုဆွဲလည့်ကာ ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။ ထိုနောက် သူဇာ့ထဘီးကိုမကာ ပင်တီလေးကို အောက်နဲနဲလေးဆွဲချကာ နောက်သို့ပြုးထွက်နေသော သူဇာ့စောက်ဖုတ်ထဲသို့ လီးကြီးကိုထိုးထည့်လိုက်သည်။ သူဇာစောက်ဖုတ်က စောက်ရေများနှင့် ရဲဇော်လိုးထားသော လရည်များကြောင့် လီးကြီးက အဆင်ပြေချော့မွေ့စွာ သူဇာ့စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်သွားသည်။
သူဇာလဲ လီးကြီးက ဆောင့်ကာတိုးဝင်လာသောကြောင့် သူဇာတစ်ချက်တွန့်သွာသည်။ ရဲဇော်လဲ သူဇာ့ခါးကိုကိုင်ကာ နောက်မှတရက်ဆက် ဆောင့်လိုးလိုသည်။သူဇာလဲ ကျော်ထက်ဆောင့်လိုးချက်များကို မွေ့ယာခင်းများကိုစုတ်ကာ ခံနေသည်။ ကျော်ထက်က သူဇာ့ရဲ့ အပျိုစင်မဟုတ်တော့တဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို တစက်မှမညှာပဲ ဆောင့်ကာဆောင်ကာ လိုးနေသည်။ ကျော်ထက်က သူဇာ့ကိုဆောင့်လိုးနေရင်း သူဇာ့ဖင်ကြီးကိုလဲ တစ်ဖက်တချက် ရိုက်ကာလိုးနေသည်။ “အား……… ကိုနဲနဲလျော့ပါဦး အား……..” “ရဲဇော်နဲ့တောင် တညလုံးအလိုးခံလာတာပဲ သူဇာခံနိုင်မှာပါ” ကျော်ထက်လဲ နဲနဲမောလာသောကြောင့် သူဇာ့ပေါ်မှောက်ကာလိုးရင်း သူဇာ့အင်္ကျီများကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ထိုနောက် သူဇာ့နို့လေးများကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ချေကာ ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ သူဇာ့နို့လေးများသည် ကျော်ထက်ချေပေးမှုကြောင့် ရဲတတ်လာသည်။ သူဇာ့စောက်ဖုတ်မှာလဲ ရဲဇော်လိုးထားသောလရည်များနှင့် အသံမျိုးစုံ ထွက်နေသည်။ “သူဇာ ကုတင်ပေါ်တတ်ပြီး မှောက်ပေးနော် ကိုအပေါ်ကနေ တတ်ဆောင့်ပေးမယ်” သူဇာလဲ ကျော်ထက်ပြောသည်နှင့် ထဘီနှင့် ပင်တီလေးကိုချွတ်ကာ ကုတင်ပေါ်တတ်ပြီး မှောက်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျော်ထက်က သူဇာ့ခါးအောင်တွင် ခေါင်းအုန်းတစ်ခု ထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်။ ထိုချိန်တွင် သူဇာ့စောက်ဖုတ်လေးသည် ပေါင်တန်သွယ်သွယ်လေးကြားမှ ပြုးထွက်ကာ ကျော်ထက်လီးကြီးကို စောက်ရည်တွေစိုရွဲကာ မျော်နေသည်။ ကျော်ထက်လဲ မှောက်ပေးထားသော သူဇာ့ပေါ်သို့ခွကာ သူဇာ့ပေါင်တန်သွယ်သွယ်လေးကြားမှ စောက်ဖုတ်လေးကို လီးကြီးဖြင့်ထိုးကာ ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။
ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့ပေါ်မှောက်ကာ စောင့်လိုးနေသည်။ သူဇာကလဲ ကျော်ထက်လီးကြီး ဝင်ထွက်ကောင်းစေရန် ဖင်ကြီးကိုကော့်ကာ ကျော်ထက်စောင့်သမျှကို ခံနေသည်။ “အား………… အား……….. ကောင်းလိုက်တာကိုရယ် ဆောင့်လိုး သူဇာ့စောက်ဖုတ်ကို ကွဲသွားအောင်ဆောင့်လိုးပေး” သူဇာလဲ ရမက်များထန်လာကာ ကျော်ထက်ကို စောင့်လိုးရန် တောင်းဆိုနေသည်။ ကျော်ထက်ကလဲ လက်ကိုထောက်ပြီး သူဇာ့ဖင်ကြီးတွေ တုန်ခါနေအောင် ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ လိုးနေလိုက်သည်။ “ကောင်းလိုက်တာသူဇာရယ် မင်းစောက်ဖုတ်က ရဲဇော်လိုးပြီးတာတောင် အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ ” “သူဇာ့စောက်ဖုတ်ကို ကြိုက်လားဟင်” “ကြိုက်တာပေါ့ကွ သူဇာ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အရင်ထဲကလိုးချင်နေတာ မင်းစောက်ဖုတ်ကြီးက အရမ်းညှစ်တာကွာ” “အတာဆို အမြဲတမ်းလိုးနော်” “အား……….. အား………….. သူဇာပြီးတော့မယ်ကိုရယ် မြန်မြန်လေးဆောင့်လိုးပေး” ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အားပြင်းပြင်းဖြင့် ဆောင့်ကာ အချက်များများလိုးပေးလိုက်သည်။ သူဇာလဲ ဖင်ကြီးကိုကော့ကာ တဆက်ဆက်တုန်ရင်း ပြီးသွားသည်။ ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့စောက်ဖုတ်ထဲက ညှစ်အားကြောင့် သူဇာနှင့်အတူတူပြီးသွားသည်။ ထိုနေ့က သူဇာနှင့်ကျော်ထက်တို့နှစ်ယောက် ဟော်တယ်တွင် အချိန်ကုန်ခဲ့သည်။ နောက်နှစ်ရက်လောက်ထိ သူဇာလမ်းပင်မလျောက်နိုင်ပဲ အိမ်တွင်းအောင်းနေခဲ့ရသည်။
“အား…….အား…… ကောင်းလိုက်တဲ့ဖင်ကြီးကွာ ကိုကျော်ထက်က ဘယ်နှချီတောင် လိုးလိုက်တာလဲဟင်” “တစ်နေကုန်လိုးတာမောင်ရဲ့ ခိုင်မှာဖင်တွေကို ကျိန်းနေတာပဲ” “ကိုကျော်ထက်နဲ့ခံရတာ ကောင်းလားခိုင်” “အရမ်းကောင်းတာပေါ့ ကိုကျော်ထက်လီးကြီးက မောင့်ထက်ရှည်တယ်” “အား………. အား……….. မောင် ဖင်လိုးရင်း ဖုတ်ကိုပွတ်ပေး ခိုင့်ဖုတ်ကြီးယားလာပြီ ပြီးတော့မယ်” “မောင်လဲပြီးတော့မယ်ကွာခိုင်သူနှင့်ရဲဇော်လဲ အပြိုင်ဆောင့်ကြရင်း ပြိုင်တူပြီးသွားကြသည်။ ရဲဇော်တိုက်ခန်းလေးထဲတွင် ခိုင်သူတို့အချစ်ပွဲ ပြီးကာ နှစ်ယောက်သားဖက်ကာ အမောဖြေနေကြသည်။ ခိုင်သူဖောက်ပြန်ပြီးသည့်နောက်တွင် ရဲဇော်စိတ်ထဲတွင် ခိုင့်သူကို တခြားတစ်ယောက်လိုးသည်ကို သဘောကြလာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ခိုင်သူ့ကို ကျော်ထက်နှင့်လိုးသော အကြောင်းများကို မေးကာလိုးရသည်ကို နှစ်သက်လာတော့သည်။ ကျော်ထက်စိတ်ထဲတွင် ခိုင်သူ့ကို နှစ်ယောက်ပေါင်းကာ လိုးချင်သည့်စိတ်များ တိုးလို့လာနေသည်။ ခုဆို ခိုင်သူလဲ ကျော်ထက်နှင့်လိုးသည်များကို ပြောရသည်မှာ ရဲလာပြီးဖြစ်သည်။ ရဲဇော်ဒီနေ့တွင်တော့ သူဖြစ်ခြင်သည်များကို အကောင်ထည်ဖော်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ “ခိုင် မောင်ခိုင့်ကိုပြောစရာရှိတယ်” “ပြောလေမောင်ရဲ့ ဘာကိစ္စလဲ” “ဒီလိုလေ မောင်ခိုင့်ကို ကာမအရသာသစ်ခံစားစေချင်လို့ နောက်ပြီး မောင်လဲခံစားကြည့်ချင်လို့” “ဟင် မောင်ကခိုင့်ကို ဘယ်လိုလုပ်ချင်လို့လဲ ပြောကြည့်လေ”။
“ဒီလိုကွာ ခိုင့်ကို မောင်နဲ့တခြားတစ်ယောက်နဲ့ နှစ်ယောက်ညှပ်ပြီး လိုးကြည့်ချင်တယ်” “ဟာမောင်ကလဲ မဖြစ်နိုင်တာ ဘာလဲ မောင်ကဖောက်ပြန်ချင်လို့ ခိုင့်ကိုရမယ်ရှာနေတာလား ” “မဟုတ်ပါဘူးခိုင်ရယ် အချစ်ကအချစ်လေ ခုဟာက ဆက်စီမှာ မောင်တို့နှစ်ယောက်တူတူ ပျော်ချင်လို့ မောင်ကခိုင်ကိုပဲချစ်တာပါဗျ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ မောင်ကခိုင့်ကိုလက်ထပ်မှာပါ” “အတာဆိုဘာလို့လဲ ခိုင့်ကိုဘယ်သူ့ကိုပေးလုပ်မလို့လဲ မောင်ရက်စက်တယ်ကွာ ခိုင့်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူး” “ဟာမဟုတ်ရပါဘူးခိုင်ရယ် ခုဟာက ခိုင်အဆင်ပြေမှပါ နောက်ပြီးခိုင်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့လူနဲ့မှပါ မောင့်စိတ်ထဲမှာ ခိုင်နဲ့တခြားတစ်ယောက်နဲ့ လိုးတာကို ဖီးလ် ဖြစ်လို့ပါ” “မောင်မမှတ်တေးဘူးလား မောင်ကိုလက်စားချေပြီး ခိုင့်ဖင်ကို သူများပါကင်ဖွင့်ခံလိုက်တာလေ မောင်ထက်ဖြစ်ချင်ရင်လုပ်လိုက်လေ” “ဟာရဲဇော်ရာ မင်းတကယ်ဟုတ်လို့လား” “ဟုတ်ပါတယ်ကိုကျော်ထက်ရယ် ကိုကျော်ထက်ကရော ဖြစ်ရဲ့လား” “ဟ မင်းခွင့်ပြုတယ်ဆို ငါကတော့ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူဇာစိတ်ဆိုးမယ်ထင်တယ်” “အတာဆိုကိုကျော်ထက်က အဆင်မပြေဘူးလား” “ဟာမင်းကလဲ လုပ်မှာပေါ့ သူဇာ့ကိုပြီးမှချော့လိုက်မယ်” ရဲဇော်က ကျော်ထက်ကို ခိုင်သူအား နှစ်ယောက်ဝိုင်းညှပ့်ချရန် ပြောလိုက်သည်။ ကျော်ထက်ကို ခိုင်သူတောင်ဆိုခဲ့တာဖြစ်သည် ။ ခိုင်သူ့အတွေးမှာ ရဲဇော်က ကျော်ထက်ကိုစိတ်နာကာ ကျော်ထက်နှင့်တော့ သူမအားမလုပ်ဟုတွေးကာ ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ရဲဇော်အတွေးထဲက ခိုင်သူ့ကိုဝိုင်းချရန် တွေးထားသော လူကလဲ ကျော်ထက်ပင်ဖြစ်သည်။ “တူ……. တူ……… ဟယ်လို မောင်” “ခိုင် မောင်တို့ဟိုကိစ္စအဆင်ပြေတယ် ကိုကျော်ထက်က လက်ခံတယ်ကွ မနက်ဖြန် မောင့်တိုက်ခန်းကို လာခဲ့နော်” “ဟာ မောင်တကယ်ကြီးလား မောင်ကကိုကျော်ထက်နဲ့ခိုင်ကို တကယ်ပေးနေမှာလား” “တကယ်ပေးနေမှာပေါ့ ခိုင်ပဲကိုကျော်ထက်ဆို လက်ခံတယ်ဆို” “ခိုင်က ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာ” “မရတော့ဘူးနော်ခိုင် မောင်ကအကုန်စီစဉ်ပြီးပြီ” “အင်းပါ ဒါပေမဲ့ မနက်ဖြန်စနေနေ့ကြီးလေမောင် ” “သိတယ်လေခိုင်ရဲ့ ကျောင်းပိတ်မှ မမသူဇာမပါမှာပေါ့ကွ ဟုတ်ဘူးလား” “…….” ။စနေနေ့။ ခိုင်သူတစ်ယောက် မနက်အစောကြီးထဲကထကာ အလှတွေပြင်နေသည်။ အဝတ်စားများကိုလဲ ဆက်စီဖစ်တာများကို ရွေးကာဝတ်ဆင်နေသည်။ ခိုင်သူ့စိတ်ထဲတွင် ကျော်ထက်နှင့်ရဲဇော် နှစ်ယောက်ညှပ်ချမည်ကိုတွေးရင်း ရင်တွေခုန်နေသည်။ တကယ်တော့ခိုင်သူသည် ကျော်ကကို ကြိတ်ကြွေနေသည် ။ နောက်ပြီး ကျော်ထက်ရဲ့ အလိုးကျွမ်းကျင်မှုများကိုလဲ ခိုင်သူတစ်ယောက် စွဲလမ်းနေပြီဖြစ်သည်။ ခိုင်သူတစ်ယောက် သူငယ်ချင်းများနှင့် ပျော်ပွဲစားဟုပြောကာ အိမ်မှ မနက်၉နာရီလောက်တွင် ထွက်လာခဲ့သည်။ ခိုင်သူသည် အပေါင်းသင်းပေါများသူမို့ မိဘများကယုံကြည့်သည်။ မယုံကြည်တာကတော့ သူဇာတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လဲ ရဲဇော်နှင့် ချိန်းထားသည်ဟုထင်ကာ ဒီတိုင်းပဲလွတ်လိုက်သည်။ ဒေါက်…. ဒေါက်.. ဒေါက်…. ခိုင်သူတံခါးခေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ရဲဇော်တံခါးကို အမြန်လာဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက် စားသောက်စကာများဝယ်ရမည်မို့ ခိုင်သူ့ကိုတစ်ယောက်ထဲထားခဲ့ကာ shopping center သို့ထွက်ခဲ့လိုက်သည်။ ခိုင်သူက အခန်းထဲတွင် ကျော်ထက်အလာကို တစ်ယောက်ထဲ ဆောင့်နေသည်။ ရဲဇော်ထွက်သွားပြီး ခဏအကြာတွင် ကျော်ထက်ရောက်လာသည်။ ခိုင်သူနှင့်ကျော်ထက်က ရင်းနှီးထားသူများပီပီ ခိုင်သူက ကျော်ထက်ကိုဖက်ကာ အနမ်းများပေးရင်း စီးကြိုလိုက်သည်။ ရဲဇော်က ခိုင်သူနှင့်ကျော်ထက်အား ဧည်ခံရန် ပစ္စည်းများကို ပြည့်စုံအောင်ဝယ်နေသည်။ ခိုင်သူ့အတွက်ဝိုင်နှင့် သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် အရက်ပြင်းပြင်းကို ရွေးကာဝယ်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် နဲနဲအပျော့သောက်ရန် ဘီယာပုလင်းများလဲ ဆွဲခဲ့လိုက်သည်။ ရဲဇော်တိုက်ခန်းပြန်ရောက်တော့ ၁၀နာရီပင် ကျော်နေပြီဖြစ်သည်။ ရဲဇော်လဲ အထဲကနှစ်ယောက် ဘာလုပ်နေမလဲသိချင်တာနဲ့ သော့ပိုတစ်ချောင်းနဲ့ ဖွင့်ကာ အိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့လိုက်သည်။ “အား….. အား……….” ထိုအသံကိုကြားလိုက်ချိန်တွင် ရဲဇော်အံသြသွားသည်။ ရဲဇော်စိတ်ထဲတွင် ထိုခြေနေလောက်ထိ ရောက်နေလိမ့်မည်ဟု့ တွေးမထားခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအသံများကိုကြားသည်နှင့် ရဲဇော်ရဲ့ ကားမစိတ်များလဲ ကြွကာလာခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် ရဲဇော်သည် ဝယ်လာသောပစ္စည်းများကို စားပွဲပေါ်တွင်ချကာ အသံလာရာကို သွားလိုက်သည်။ အသံလာရာ အခန်းထဲတွင်……အသံလာရာမှာ အခန်းထဲမှဖြစ်သောကြောင့် ရဲဇော်လဲ အသံလာရာအခန်းထဲကို ဟနေသောတခါးမှ ကြည့်လိုက်သည်။ အခန်းထဲတွင် ခိုင်သူက သူဝတ်လာသော ဘောင်ဘီအတိုလေးကို ပေါင်လယ်လောက်ထိချွတ်ထားသည်။ အပေါ်ပိုင်းမှာလဲ အင်္ကျီအကြပ်လေးကို နို့များပေါ်အောင်လှန်ပေးထားသည်။ ကျော်ထက်ကလဲ ဂျင်းဘောင်ဘီကို ခြေသလုံးထိချွတ်ထားသည်။ ခိုင်သူက ကျော်ထက်လိုးရတာ အဆင်ပြေစေရင် ကုတင်ပေါ်သို့လက်ထောက်ကာ ကုန်းပေးထားသည်။ ကျော်ထက်ကလဲ ခိုင်သူ့နောက်မှ ခါးလေးကိုင်ကာ အားပြင်းပြင်းနဲ့ တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ကာလိုးပေးနေသည်။ ရဲဇော်လဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကာ လီးမှာတင်းကာတောင်လာသည်။ ရဲဇော်က သူ့ချစ်သူ ခိုင်သူအလိုးခံတာကိုကြည့်ရင်း ကာမရမက်များတိုးကာလာသည်။ ထိုကြောင့် ဘောင်ဘီ ခါးပတ်ကိုဖြုတ်ကာ ဘောင်ဘီကို လီးပေါ်ရုံချွတ်လိုက်သည်။ ထိုနောက် လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ခိုင်သူတို့လိုးနေတာကိုကြည့်ရင်း တခါးပေါက်တွင်ရပ်ကာ ဂွင်းထုနေလိုက်သည်။ “ကိုကို ဆောင့်ပေး အရမ်းကောင်းတယ် ဆောင့်လိုးပေး” “လိုးပေးမှာပေါ့ခိုင်ရဲ့ ဖုတ်လေးကအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ” ရဲဇော်လဲ အခန်းထဲမှနှစ်ယောက် စကားများကြားကာ လီးမှအလွန်တောင်လာသောကြောင့် ခက်သွက်သွက်လေး ထု့နေလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်ဆောင့်ပေးတာကို အားမရပဲ ဖင်ကြီးကိုနောက်ပြစ်ကာ ဆောင့်ဆောင့်ပေးနေသည်။
“ခိုင်သူ လက်လေးနဲ့ အစိလေးကို ပွတ်ကစားပါလား” “ဟုတ်ကိုကို ခိူင်သူ့ဖုတ်ထဲက အရည်တွေအရမ်းထွက်နေပြီ” “အရည်တွေစိုလာရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ ခိုင်သူရဲ့” ရဲဇော်လဲ ခိုင်သူတို့လိုးပွဲကို မမှိတ်မသုန်းကြည့်နေသည။် လက်ကလီးကြီးကလဲ ခုတော့မှရမက်တွေထန်ကာ အရင်ကထက်ပင် ပိုကြီးနေသည်။ ရဲဇော်ကြည့်နေစဉ်မှာပဲ ကျော်ထက်က ဆောင့်တာကိုရပ်ပြီး လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ထိုနောက်ခဏအကြာတွင် လီးကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်သွင်းကာ ညှောင့်လိုးလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ အံလေးကြိတ်ကာ ကျော်ထက်လိုးသမျှကို ခံနေသည်။ “ခိုင်သူ မင်းဖုတ်ထဲကို မင်းလက်နှစ်ချောင်းထည့်ပြီး ဆွနေနော် ဒါမှရဲဇော်ပြန်လာရင် ခံစားရမဲ့အရသာကိုသိမှာ အားရမ်းကောင်းတာပဲကိုကိုရယ် ကို့လီးကြီးက အရမ်းစွဲစေတာပဲ ခိုင်သူတော့ အမြဲပဲလိုးခံချင်တော့တာ” ထိုချိန်မှ ရဲဇော်လဲ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ကိညုး ဖင်လိုးနေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ခိုင်သူ့အော်သံများသည် ရင်ခေါင်းသံပေါက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရဲဇော်လဲ ထိုးနှစ်ယောက်လိုးနေတာ ကြည့်ရင်း လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ဆက်တိုက်မြန်မြန် ထုချလိုက်တော့သည်။ ရဲဇော်လီးထိပ့်မှ လရည်များ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ကျသွားတော့သည်။ အခန်းထဲမှ ကာမသားကောင်နှစ်ဦးလဲ အရှိန်တွေမြင့်ကာ ခဏအကြာတွင် ပြီးသွားကြသည်။ သူတို့ပြီးသွားမှ အခန်းဝက ရဲဇော်ကိုတွေ့လိုက်ကြသည်။ “ဟာ ရဲဇော်” “ဟင် မောင်” “မောင်ဘယ်ချိန်ထဲက ရောက်နေတာလဲဟင်” “ငါတို့နှစ်ယောက်လဲ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်လို့ မင်းကိုမစောင့်ပဲ လိုးလိုကြတာ”။
“မောင်စိတ်ဆိုးနေပြီလားဟင်” “စိတ်မဆိုးပါဘူးခိုင်ရဲ့ ခိုင်တို့လိုးနေတာကိုကြည့်ပြီး မောင်လဲဖီးလ်အရမ်းတတ်လို့ ထုလိုက်တာ ခိုင်တို့ရှေ့လေးတင်ပြီးသွားတာ” “ရဲဇော် sorryပဲကွာ ငါမင်းကိုမစောင့်လိုက်မဘူး” “ဟာ မလိုပါဘူးကိုကျော်ထက်ရယ် ခုလိုဆိုတော့ ပိုတောင်ကောင်းသေး” ထို့နောက် ရဲဇော် ကျော်ထက်နှင့် ခိုင်သူတို့လဲ စားကြသောက်ကြသည်။ ပထမပိုင်းတွင် ရဲဇော်နဲ့ခိုင်သူက တတွဲထိုင်နေသည်။ ကျော်ထက်ကတော့ သူတို့နဲ့မျက်နာချင်းဆိုင်တွင် ထိုင်ကာ ရဲဇော်ဝယ်လာသော အရက်ပြင်းပြင်းကို ဇိမ်ခံကာ သောက်နေသည်။ ခိုင်သူကတော့ ဝိုင်တင်အားမရပဲ ဘီယာများကိုပါ ရောသောက်နေသည်။ ခိုင်သူလဲ မျက်နာများနီရဲကာ မူးလာသည်။ “ကိုကျော်ထက် ခိုင်သူ့ဘေးလာထိုင်လေ ဒီမှာအကျယ်ကြီး ရှိတေးပါတယ်” ခိုင်သူလဲမူးကာ ကျော်ထက်ကို သူမဘေးတွင်လာထိုင်ရန် ခေါ်လိုက်သည်။ ရဲဇော်နှင့် ကျော်ထက်တို့လဲ မှန်လာကြသည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူဘေးတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ခိုင်သူက ရဲဇော်နှင့် ကျော်ထက် နှစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်တလှည့် အရက်တိုက်လိုက်သည်။ထို့နောက် ရဲဇော်က ခိုင်သူ့ပေါင်လေးမှစကိုင်ကာ ဘောင်းဘီပော်မှ ဖုတ်လေးကိုပွတ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်ကတော ခိုင်သူ့နို့လေးမျာကို ဖော်ကာ စို့နေသည်။ ခိုင်သူလဲ ရဲဇော်ခါးပတ်ကိုချွတ်ကာ ဘောင်ဘီထဲမှ လီးကြီးကိုထုတ်ကာ ထုပေးနေလိုက်သည်။ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့အင်္ကျီလေးနှင့် ဘော်လီလေးကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။
ခိုင်သူလဲ မက်တ်ရပ်ကာ ဘောင်းဘီးလေးကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ထိုနောက် ရဲဇော်လဲ ခိုင်သူ့ပင်တီလေးကို သူကိုယ်တိုင်ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူပြန်ထိုင်လိုက်ချိန်တွင် ရဲဇော်က ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးကို နှုတ်ခမ်းနှင့်တေ့ကာ ဂျာပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ ရဲဇော်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်လေးအားနမ်းသမျှကို ခံစားနေသည်။ ထိုချိန်တွင် ကျော်ထက်က အဝတ်စားများကိုချွတ်ကာ ခိုင်သူ့နှုတ်ခမ်းသို့ သူ့လီးကြီးထိုးပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်လီးကြီးကို အလိုက်သိစွာ စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ခေါင်းကိုကိုင်ကာ လီးကြီးကို ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ရဲဇော်ကလဲ ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားများကို စွဲစုပ်ကာ စိလေးကိုယက်ရင် ဂျာပေးနေလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ပါစပ်မှလီးကိုစုပ်ရင်း စောက်ဖုတ်ယက်ခံရသည်ကို အရမ်းကြိုက်နေပြီး ဖြစ်သည်။ ခိုင်သူလဲ စောက်ဖုတ်ထဲမှ အရမ်းယားကာ ကာမရမက်များထန်လာသည်။ “ခိုင် မောင့်ကိုကုန်းပေးနော် မောင်ခိုင့်ဖင်ကို လိုးပေးမယ်” ခိုင်သူလဲ ရဲဇော်ပြောသည့်အတိုင်း ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ရဲဇော်က စောစောက ကျောက်ထက်လိုးထားသော ခိုင်သူ့ဖင်လေးကို စစချင်းထဲက ဆောင်ကာလိုးလိုက်သည်။ ခိုင်သူ့ဖင်ထဲတွင် ကျော်ထက်လရည်များက ရှိနေသေးသောကြောင့် ရဲဇော်လီးကြီးမှာ ချော့မွေ့စွာဝင်သွားသည်။ စစချင်းမှာ ဆောင့်သွင်းခံလိုက်ရသောကြောင့် ခိုင်သူတစ်ချက်တွန့်ကာ သွားသည်။
ပါစပ်မှအော်လိုက်သော်လဲ ကျော်ထက်လီးကြီးကိုစုပ်ရက်နှင့်မို့ အသံမထွက်လိုက်ပေ။ ရဲဇော်က နောက်မှ ခိုင်သူ့ဖင်ကို ဆောင့်လိုးသလို ကျော်ထက်ကလဲ ခိုင်သူပါစပ်ကို ဆောင့်ကာဆောင်ကာ လိုးလိုက်သည်။ ခိုင်သူ့ပါးစပ်ထဲတွင် ကျော်ထက်လီးကြီးက ပြည့်သိပ့်ကာ လည်ချောင်းထဲထိရောက်ရောက်သွားသည်။ နောက်မှလဲ ရဲဇော်ဆောင့်ကာ ပြန်ထုတ်လိုက်တိုင်း ခိုင့်သူစအိုသားများပါ ကပ်ကာကပ်ကာ ပါပါလာသည်။ “ကိုကို ထိုင်လိုက်ပါလား ခိုင်သူအပေါ်ကနေ တတ်ဆောင့်ပေးမယ်” ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူပြောသည့်အတိုင်းထိုင်ကာ တောင်နေသောလီးကြီးကို လိုင်ကာ စောင့်နေလိုက်သည်။ ထိုချိန်မှ ရဲဇော်ကလဲ ဖင်ထဲမှ လီးကြီးကိုချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူက ကျော်ထက်ပေါ်တတ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ကျော်ထက်လီးကြီးကို ကိုင်ကာထည့်ပေးရင်း ထိုင်ချလိုက်သည်။ ရဲဇော်က နောက်မှနေပြီး လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ထုရင်းကြည့်နေလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်ပေါ်တွင် အားပြင်းပြင်းနှင့်ဆောင်ကာ လိုးနေသည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့အိုးကြီးကိုကိုင်ကာ ခိုင်သူ့နှုတ်ခမ်းအားနမ်းနေသည်။ရဲဇော့် တိုက်ခန်းလေးထဲတွင် ကျော်ထက်နှင့် ခိုင်သူတို့ လိုးသံများ ဆူညံနေသည်။ ရဲဇော်လဲ ခိုင်သူ၏ တဏှာရမက်များပြင်းပြင်းနှင့် ဆောင့်လိုးနေမှုများကို ကြည့်ရင်း ရမက်စိတ်များပိုပိုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ခဏအကြာတွင်ရဲဇော်က ခိုင်သူ့ခါးကိုထိန်းကိုင်လိုက်ကာ ခိုင်သူ့ဖင်ထဲသို့ လီးကြီးကိုထိုးစိုက်ကာ လိုးလိုက်သည်။ ဒီတခါတွင်တော့ ခိုင်သူတစ်ယောက် ကျော်ထက်နှင့် နှုတ်ခမ်းခြင်းဂဟေဆက်ကာ မနမ်းနိုင်တော့ပေ။
အား…….. အား……. “မောင် ဖြေးဖြေး လီးကြီးနှစ်ချောင်းဝင်နေတာ ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးကွာ” ကျော်ထက်ကလဲ ရဲဇော်လီးကြီး ကောင်းကောင်းဝင်လာနိုင်စေရန် ခိုင်သူဖင်ကြီးကို ဖြဲပေးထားလိုက်သည်။ ခိုင်သူသည် ခုမှလီးနှစ်ချောင်စခံတာမို့ လီးနှစ်ချောင်းဒက်ကို ကောင်းကောင်းခံနေရသည်။ ကျော်ထက်နဲ့ ရဲဇော်ကလဲ လီးကြီးများကို အဆုံးထိထည့်ကာ ဖိပြီးကပ်ညှောင့်နေကြသည်။ ခဏအကြာတွင် ခိုင်သူလဲ ငြိမ်သွားကာ လီးနှစ်ချောင်ဒဏ်ကို ခံနိုင်လာသည်။ ခိုင်သူခံနိုင်လာတာကိုသိသော ရဲဇော်နဲ့ကေထ်ာထက်ကလဲ စည်းချက်ညီညီ နှစ်ယောက်သား ဆောင့်ကာလိုးလိုက်ကြသည်။ ခိုင်သူကလဲ လီးနှစ်ချောင်အရသာကိုသိကာ အားမရနိုင်တော့ပဲ အလည်မှနေပြီး လီးနှစ်ချောင်ကိုပြန်ကာ ဆောင့်နေသည်။သုံးယောက်သား အခန်းထဲတွင် အသံမျိုးစုံထွက်အောင် လိုးနေကြသည်။ ဆက်တိုက်ဆောင်ကာ လိုးနေကြသောကြောင့် မောလာကြသည်။ ခဏဖိကပ်ကာ ညှောင့်လိုးကြပြီး ပုံစံပြောင်းလိုက်သည်။ ရဲဇော်က မက်တတ်ရပ်ပြီ ခိုင်သူနဲ့မျက်နာချင်းဆိုင်နေကာ ခိုင်သူ့ပေါင်ကိုမလိုက်ပြီး လီးကြီးကိုထည့်လိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ရဲဇော်လည်ပင်းကိုသိုင်းဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျော်ထက်က နောက်မှနေ၍ ခိုင်သူ့ဖင်ထဲကို လီးကြီးထည့်ကာ ခပ်စပ်စပ်လေး ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။ ကျော်ထက်က ဖင်လိုးနေရင်း ခိုင်သူ့နို့လေးများကို နောက်မှနိုက်ကာ လိုးနေလိုက်သည်။ ရဲဇော်နဲ့ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ကို အပြိုင်ဆောင့်ကာ လိုးလိုက်သည်။ ဆောင့်ကာလိုးနေရင်း ခဏအကြာတွင် သုံးယောက်သား အားပြင်းပြင်းနှင့်ဆောင့်ကာ ပြိုင်တူပြီးသွားကြသည်။ ထိုနေ့တွင် ခိုင်သူ ညနက်မှ အိမ်ပြန်ကာ သုံးသောက်သား တစ်နေကုန် လိုးဆော်ခဲ့ကြလေတော့သည် …….. ပြီးပါပြီ။